Peeji weebusaiti | ethereum.org
Nye aka tinye ozi ohuru na peeji a
Enwere udi ohuru nke peeji a mana o no naani na asusu Bekee ugbu a. Nyere anyi aka tugharia nke kachasi ohuru.
Bu sayfa tercüme edilmiyor. Bu sayfayı şimdilik bilerek İngilizce bıraktık.
Ngwa komputa na aru oru na sistemu komputa (dapps)
Non-fungible tokin (NFTs)
Ego n'enweghi nchikwa (DeFi)
Otu zoro ezo n'enweghi nchikwa (DAOs)
Gịnị bu Ethereum?
Gịnị bu ether (ETH)?
Nchekwa Ethereum na mgbochi ọhị
Akụkọ ihe mere eme nke Ethereum
Ethereum nke 2.0
Mmelite Atumatu aro nke Ethereum
Ntuziaka obodo na akụrụngwa
Isi ulo oru ndi Mmeputa
Ihe omumu na aka onye nkuzi
Muta ihe site na eji koodu
Hazie gburugburu ebeulo
Ethereum Bloockchainu na enyefe ego
Ethereum nke onwe
Ndi otu nwere otu mmasi
Enweghị nsonaazụ maka ọchụchọ gị ""
Nnọọ na Ethereum
Ethereum bụ teknụzụ obodo na-eme ka cryptocurrency na-arụ ọrụ, ether (ETH) na ọtụtụ puku ngwa enweghị nchikota.
ethereum.org bụ ọnụ ụzọ gị n'ime ụwa Ethereum. Teknụzụ dị ọhụrụ na-agbanwe agbanwe - ọ na-enyere aka inwe onye ndu. Nke a bụ ihe anyị na-akwado ka ị mee ma ọ bụrụ na ịchọrọ imikpu n'ime.
Họrọ obere akpa ego
Obere akpa ego na-enye gị ohere ijikọ na Ethereum wee jikwaa ego gị.
ETH bụ ego nke Ethereum - ị nwere ike iji ya na ngwa ọrụ.
Dapps bụ ngwa ọrụ nke Ethereum kwadoro. Hụ ihe ị ga-eme.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ide koodu na Ethereum, anyị nwere akwụkwọ, nkuzi na ndị ọzọ na ọwa onye nrụpụta anyị.
Ethereum bụ teknụzụ nke n'ekpuchi ego dijitalụ, ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ na ngwa ọrụ. Ndị obodo a ewulitela akụ na ụba dijitalụ na-eto eto, ụzọ ọhụrụ nwere obi ike maka ndị okike iji nweta ego n'ịntanetị, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ mepere emepe maka onye ọ bụla, ebe ọ bụla ịnọ n'ụwa - naanị ihe ị chọrọ bụ ịntanetị.
Gịnị bu Ethereum?Ihe ndị ọzọ na ego dijitalụ
Usoro ego kacha mma
Taa, ọtụtụ ijeri mmadụ enweghị ike imepe akaụntụ ụlọakụ, ndị ọzọ ka egbochiri ịkwụ ụgwọ ha. Usoro ego ego nke Ethereum (DeFi) adịghị ehi ụra ma ọ bụ ịkpa ókè. Naanị ijikọ ịntanetị, ị nwere ike izipu, nata, gbaziri, kpata ọmụrụ nwa, nakwa kwanye ego n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Ịntanetị nke akụrụngwa
Ethereum abụghị naanị maka ego dijitalụ. Ihe ọ bụla ị nwere nwere ike inwe nnọchite anya, zụọ n'ahịa ma tinye ya ka ọ bụrụ tokin na-abụghị fungible (NFT). Ị nwere ike ime ka nka gị buru tokin wee nweta ụgwọ ọrụ na-akpaghị aka mgbe ọ bụla erere ya ọzọ. Ma ọ bụ jiri tokin ma ọ bụ ihe ị nwere iji were mbinye ego. Ohere na-eto eto mgbe niile.
Ihe ndị ọzọ na NFT
Ịntanetị mepere emepe
Taa, anyị na-enweta ọrụ ịntanetị 'n'efu' site n'ịhapụ njikwa ozi nkeonwe anyị. Emeghere ọrụ Ethereum na ndabara - naanị ihe ị chọrọ bu obere akpa ego. Ndị a bụ n'efu ma dịkwa mfe ịtọlite, nke ị ga-achịkwa ma jiri rụọ ọrụ na-enweghị ozi nkeonwe.
Lelee ịntanetị mepere emepeNdị ọzọ na obere akpa ego
Ụlọ akụ nke gị
Ị nwere ike wulite ụlọ akụ site na mgbagha ị dere.
Ego nke gị
Ị nwere ike ịmepụta tokin ị nwere ike ịnyefe ma jiri n'ofe ngwa ọrụ.
Ị nwere ike iji asụsụ ndị dị adị ka gị na Ethereum na ngwa ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta.
DNS mepere emepe na anaghị eji ikike
Ị nwere ike chegharịa ọrụ ndị dị ugbu a dị ka nk e n'enweghi nchịkwa, ngwa ọrụ mepere emepe.
Oke ọhụrụ maka mmepe
Ọwa onye nrụpụta
Ọnụọgụ netwọkụ kachasị ọhụrụ
Ọnụ ahịa ETH (USD)
Ọnụahịa kacha ọhụrụ maka 1 ether. Ị nwere ike ịzụta opeka mpe 0.000000000000000001 – ịkwesighi ịzụtacha 1 ETH dum.
Ọnụọgụ azụmahịa gara nke ọma na netwọk n'ime awa 24 gara aga.
Akpọchiri uru ego na DeFi (USD)
Ọnụ ego a na-enweta na ngwa ego (DeFi) n'enweghi nchikwa, akụ na ụba dijitalụ Ethereum.
Ọtụtụ puku ndị ọrụ efu na-arụ ọrụ Ethereum gburugburu ụwa, nke a maara dị ka nodu.
Kwalite ihe ọmụma Eth2 gị
Ethereum 2.0 bụ mmemme nke nkwalite ejikọrọ ọnụ emebere iji mee ka Ethereum dịkwuo elu, nchekwa, na nke ga-adigide.
Ethereum maka ụlọ ọrụ
Hụ otu Ethereum nwere ike isi mepee ụdị azụmaahịa ọhụụ, belata ọnụahịa gị yana gosipụta azụmaahịa gị n'ọdịnihu.
Ndi otu Ethereum
Ethereum bụ ihe niile gbasara obodo. Ọ bụ ndị si na nzụlite na mmasị dị iche iche mejupụtara ya. Hụ ka ị ga-esi sonye.
Nye aka na ethereum.org
Weebụsaịtị a bụ ebe mepere emepe nwere narị ndị enyemaka obodo. Ị nwere ike ịtụpụta atụmatụ ndozi na ọdịnaya ọ bụla dị na saịtị a, tụọ atụmatụ ọhụrụ dị egwu, ma ọ bụ nyere anyị aka ịkpọchapụ njehie.
Ihe ndị ọzọ na inye aka GitHub
Emelitere webụsaịtị ikpeazụ: 30 Juun 2022
Ebe mbido nke Ethereum
Ebe mbido Bloogu nke Ethereum
Mmemme Nkwado Usoro gburugburu
Ihe Njirimara Ethereum
Iwu ihe nzuzo
Iwu nkwekorita maka Ojiji
Nkwuputa nke Cookie na aru oru